अख्तियारको आँखामा ९ सरकारी अधिकारी, हेर्नुस् को–को परे ? « Light Nepal
अख्तियारको आँखामा ९ सरकारी अधिकारी, हेर्नुस् को–को परे ?
काठमाडौं , २८ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप ९ सरकारी अधिकारीमाथि छानबिन थालेको छ ।
गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीहरूको सम्पत्ति अध्ययन र विश्लेषण सुरु गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ– यसअघि नै पत्र बुझ्न नमानेको भन्दै अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माका घरमा ७ दिने म्याद टाँसिसकेको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार छानबिनमा पर्नेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई उच्च अधिकारी छन् । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल र ११ औं तहका निर्देशक दामोदरभक्त श्रेष्ठमाथि छानबिन सुरु भएको छ । श्रेष्ठ चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुखसमेत हुन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्याय पनि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा छानबिनमा परेका छन् । यसैगरी, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका ११ औं तहका अधिकृत अच्युत पौडेल, सडक विभागका उपसचिवस्तरका दुई इन्जिनियर ९सीडीई० दण्डपाणि पौडेल र ज्ञानेन्द्रकुमार झासमेत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको छानबिनमा परेका छन् ।